Famaritana: Tantara sy Timeline
History & Culture Tantara amin'ny
Luigi Brugnatelli dia nanamboatra galvanisation tamin'ny taona 1805.
Ilay mpahay simia italiana, Luigi Brugnatelli dia nanamboatra electroplating tamin'ny taona 1805. Brugnatelli dia nanao ny fametrahana volamena amin'ny fampiasana ny Voltaic Pile, izay nahitan'i Allessandro Volta azy tamin'ny taona 1800. Ny didin'i Luigi Brugnatelli dia nolavin'ny mpanao didy jadona Napoleon Bonaparte, izay nahatonga an'i Brugnatelli hanafoana ny famoahana azy bebe kokoa ny asa.
Na izany aza, i Louis Brugnatelli dia nanoratra momba ny fakam-panahy ao amin'ny Gazety Belarosiana momba ny Fizika sy ny Chemistry , "Izao aho dia manana medaly volafotsy roa amin'ny fomba feno, amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny tady vy, miaraka amin'ny tsangatsangan'ny voltaika pileau, ary mitazona azy ireo iray aorian'ilay iray hafa voapetaka amin'ny ammoniuret volamena voavolavola voajanahary tsara sy tsara ".
Efapolo taona taty aoriana, dia hitan'i John Wright avy ao Birmingham, Angletera fa ny cyanide potassium dia electrolyte tsara ho an'ny famokarana volamena sy volafotsy. Araka ny filazan'ny Birmingham Jewelery Quarter, "Dokotera Birmingham, John Wright, izay nanaporofo aloha fa azo atao ny mandefa azy ireny amin'ny alàlan'ny fanidinana azy ireo ao anaty kitapo volafotsy voatazona ao anatin'ny vahaolana, izay namoahana ny herinaratra."
Ny mpamorona hafa koa dia nitarika asa mitovy. Maro ny patanty momba ny fizotran'ny fizarana elektrika no nivoaka tamin'ny taona 1840. Na izany aza, ny pataloha Henry sy George Richard Elkington dia nanasongadina ny fizotran'ny taratra electroplating voalohany. Tsara homarihina fa nividy ny zo patentina tamin'ny dingana nataon'i John Wright ny Elkington. Ny Elkington dia nanao ampihimamba tamin'ny fametrahana galvanisitra nandritra ny taona maro noho ny patentany ho an'ny lozisialy tsy dia mahafa-po.
Tamin'ny taona 1857, ny fahagagana vaovao manaraka tao amin'ny firavaka ara-toe-karena dia tonga antsoina hoe galvanisation - rehefa nampiharina voalohany tamin'ny firavaka firavaka ny dingana.
Tantaran'ny sakafo mangatsiaka
Ny tantaran'ny famalian-dresaka
Ny tantara taloha momba ny sidina
Mahavariana ny taonjato faha-15
Timeline fohy tamin'ireo taona 1950
Ny tantaran'ny asa firehetana aloha sy ny zana-afo
Tantara momba ny fitantanana hatramin'ny taonjato taloha ka hatramin'izao
Fihetseham-po lehibe indrindra: Top Inventions of the 90s
Fikarohana, Patanty sy Copyrights
Inona ny Novena? (Famaritana sy ohatra ny Novenas)
Ravaka roa: rehefa miala ny mozika sy ny zavakanto
Lazao an'i Laurie Halse Anderson
'Sokafy Rota' amin'ny gile
Ny Filazantsaran'i Marka, Toko 8
Mianara amin'ny asa 10
Poeta Amerikana tsara indrindra
Barometer Famaritana sy asa
Fitiavana ny sisin-tany
4 karazana RNA
Sukarno, Filoham-pirenena Indoneziana
Fampidirana amin'ny teny frantsay voapoizin'ny teny frantsay
Ahoana ny fahamelohana an'i Agamemnona?
Mividy Tabla sy Jori Drum Sets
Tantara avy amin'ny US Federal Income Tax
Ny vanim-potoanan'ny Afrikana-Amerikana: 1865 hatramin'ny 1869
Fomba samihafa amin'ny fanomboana
Ny Jeografia momba ny Krismasy
Top .38 Hira niavaka tamin'ny '80s